Ny sakafo misaraka - Ilay miasa! | Nutri Diet
Ny sakafo misaraka dia ao anatin'ny vondrona ny fomba fampihenana izay tsy mametra ny karazan-tsakafo rehetra ary izany dia mamela ny olona manapa-kevitra hanaraka azy mihinana kely amin'ny zava-drehetra, noho izany dia tsy heverina ho karazana sakafo ferana.
Ity karazan-tsakafo ity dia natao ho an'ireo olona ireo izay te hihena ary ho an'ireo te hitandrina azy io ary tsy hisambotra kilao fanampiny vitsivitsy. Manaraka izany dia holazaiko anao bebe kokoa momba izany ny sakafo misaraka mba hahafantaranao ny rehetra ny tombony sy ny loza mety hitranga.
1 Ny toetra mampiavaka ny sakafo tsy miharo
2 Vondron-tsakafo ao amin'ny sakafo misaraka
2.5 Legioma sy anana
3 Ahoana ny fomba fampifangaroana ireo sakafo ao amin'ny sakafo misaraka
4 Ohatra iray amin'ny menio isan-kerinandro amin'ny sakafo misaraka
5 Mahomby ve ny sakafo atokana?
Ny toetra mampiavaka ny sakafo tsy miharo
Ny sakafo misaraka an'ny vondrona fisakafoanana izay tsy mametra karazana sakafo rehetra izy ireo amin'ny drafitry ny fihenan-danja. Ny lakilen'ny sakafo toy izany dia ny fisarahana tavy, proteinina ary gliosida ary amin'izany dia aza atao miaraka ny mitondra azy ireo amin'ny takelaka iray ihany.
Amin'ny alàlan'ny fakana misaraka hoy ny otrikaina, ny vatana dia mandray ny ampahany amin'ny tavy notehiriziny afaka manao fampisehoana tanteraka ankoatry ny fanafoanana tsiranoka be dia be, izay manampy mampihena tavy amin'ny tenany.
Iray amin'ireo hevitra manohana amin'ity karazan-tsakafo ity dia manampy ny olona manaraka azy hanavaka mazava tsara vondrona sakafo tsirairay. Amin'izany fomba izany, hoy ny olona dia afaka mihinana amin'ny fomba iray salama tanteraka.
Vondron-tsakafo ao amin'ny sakafo misaraka
Araka ny efa nolazaiko anao teo aloha, ny endri-javatra lehibe ny sakafo misaraka dia ny mampivondrona ny karazan-tsakafo isan-karazany miankina amin'ny otrikaina mamorona azy.
Tovo-dronono sy ronono
Legioma sy anana
Holatra sy holatra
Ahoana ny fomba fampifangaroana ireo sakafo ao amin'ny sakafo misaraka
Dia homeko ianao ny torolàlana inona no tokony harahinao rehefa miresaka atambatra ireo sakafo samihafa amin'ny sakafo misaraka:
Tsy azonao atambatra amin'ny sakafo matavy ny proteinina.
Tsy afaka mitambatra hafa ianao gliosida amin'ny takelaka iray ihany.
Tsy tokony afangaro amin'ny gliosida proteinina.
tanto legioma toy ny legioma azonao afangaro amin'ny sakafo hafa izy ireo raha mbola tsy voankazo.
Tsy maintsy mandany ny voankazo ianao amin'ny atoandro maraina na antoandro tolakandro ary tsy mifangaro amin'ny sakafo hafa.
Tsy tokony hihinana proteinina na gliosida ianao mandritra ny sakafo hariva.
tsindrin-tsakafo Tokony ahitana kafe, fampidirana na yaourt skim.
Raha misakafo dia tsy afaka misotro zava-pisotro mamy na ranom-boankazo.
Ny fihinanana toaka sy siramamy.
Ohatra iray amin'ny menio isan-kerinandro amin'ny sakafo misaraka
Dia hasehoko anao manaraka ohatra iray amin'ny menio izany dia mety ho fototry ny zavatra arosonao ny sakafo misaraka.
Alatsinainy: Ho an'ny sakafo maraina lovia iray an'ny muesli misy ronono ary fampidirana dite maitso. Amin'ny misasak'alina dia afaka manana iray ianao voankazo. Mihinana paty misy legioma sy yaourt skim. Mofomamy amin'ny voankazo iray. Salady maitso ho an'ny sakafo hariva, trondro voaendy ary fampidirana.
Talata: Ho an'ny mofo maraina miaraka amin'ny oliva menaka ary kafe. Amin'ny sasaky ny voankazo. Amin'ny ora fisakafoanana akoho namboarina miaraka amin'ny legioma ary yaourt skimmed. Manana infusion. Amin'ny ora fisakafoanana a atody voadio miaraka anana ary fampidirana.
Alarobia: Amin'ny sakafo maraina dia afaka mahazo ianao saosisy isan-karazany eo akaikin'ny fampidirana. Amin'ny sasaky ny voankazo. Mihinana a legioma sy salady legioma miaraka amin'ny yaourt skimmed. Raha ny resaka tsakitsaky, voankazo iray no resahina. Ho an'ny sakafo hariva dia endasina ny legioma, a omelette frantsay prawn ary fampidirana.
Alakamisy: Ho an'ny sakafo maraina dia azonao atao serealy sasany misy yaourt organika eo akaikin'ny a fampidirana dite mena. Amin'ny sasaky ny voankazo. Amin'ny sakafo atoandro lovia laoka voatabia ary fampidirana. Mofomamy amin'ny voankazo iray. Ho an'ny sakafo hariva salady maitso miaraka amin'ny sombin-dranomandry sy yaourt biolojika.
Zoma: Ny sakafo maraina fromazy tsy misy tavy miaraka amin'ny yaourt organika sy fampidirana. Amin'ny sasaky ny voankazo. Mihinana makaroni sasany misy holatra ary yaourt bio. Mofomamy amin'ny voankazo iray. Ho an'ny sakafo hariva kely salmon voatono ary yaourt skimmed.
Asabotsy: Amin'ny sakafo maraina dia afaka mahazo ianao toast misy menaka oliva miaraka amin'ny yaourt skimmed sy infusion. Manana voankazo iray ho an'ny sakafo atoandro. Amin'ny sakafo atoandro voaly nendasina miaraka amin'ny legioma saosy sy famaohana. Mofomamy amin'ny voankazo iray. Ho an'ny sakafo hariva omarette asparagus ary fampidirana.
Alahady: Amin'ny fotoan'ny sakafo maraina kaopy muesli miaraka amin'ny yaourt skimmed ary fampidirana. Amin'ny sakafo atoandro dia voankazo iray. Mihinana lovia nandrahoina vorontsiloza miaraka amin'ny legioma ary yaourt skimmed. Mofomamy amin'ny voankazo iray. Amin'ny sakafo hariva dia afaka misakafo ianao lasopy legioma miaraka amin'ny akoran'akoho vitsivitsy ary fampidirana.
Mahomby ve ny sakafo atokana?
Raha ny filazan'ny ankamaroan'ny mpahay sakafo ara-tsakafo dia ny sakafo misaraka drafitra mampihena lanja tanteraka izany very kilao fanampiny vitsivitsy nefa tsy noana loatra ary miaraka famatsiana otrikaina ampy amin'ny vatana. Toa ny lakilen'ny fahombiazan'ny sakafo ity dia tsy hita amin'ny fanasarahana ireo vondrona sakafo samihafa, saingy ny antony mahatonga azy io hahomby fihinanana kaloria ambany ary ny fandrarana ny fihinanana vokatra samihafa manimba ny vatana toy ny ity ny siramamy na toaka.
Na izany na tsy izany, etsy ambany Avelako video ianao inona ny soatoavina raha toa ka mendrika ny manomboka ity sakafo ity ary very ireo kilao fanampiny ary miverena amin'ny tarehinao teo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Ny sakafo misaraka